Ndị ọka iwu ụlọ ọrụ na-enyere ụlọ ọrụ gị aka | Law & More B.V.
Dịka onye ọchụnta ego, ị ga - agharịrị ịnabata ụdị nsogbu gbasara iwu niile. Ndị ọka iwu anyị nwere echiche pụrụ iche ma nwee ike inye ndụmọdụ ma nyere gị aka n'okwu metụtara ịzụ ahịa azụmaahịa.
> Nkwado iwu kwadoro Tailor
> Onye ọka iwu
Dịka onye ọchụnta ego, ị ga - agharịrị ịnabata ụdị nsogbu gbasara iwu niile. Ndị ọka iwu anyị nwere echiche pụrụ iche ma nwee ike inye ndụmọdụ ma nyere gị aka n'okwu metụtara ịzụ ahịa azụmaahịa. A pụrụ ịtụle isiokwu ndị a:
• nguzobe nke iwu kwadoro;
• inye aka na njikwa nke ụlọ ọrụ;
• njikọta na nnweta enwere ike;
• n'ịrụsi ọrụ ike maka iwu;
• nhazi na ntule nke nkwekọrịta;
• akụkụ ụtụ dị na ụlọ ọrụ.
Na mgbakwunye na ọrụ iwu ụlọ ọrụ, Law & More na-enyekwa ọrụ niile ị ga-atụ anya n’aka ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ. Anyi bu onye ibe gi ma o di nkpa, n’inye gi iwu na inye gi nkpechite n’ihi gi mgbe odi nkpa.
Nkwado iwu kwadoro Tailor
Itinye aka n’achụ ahia na-abụkarị oge. Ya mere odi nkpa igbako na nkwado iwu ọsọsọ. Ndị ọkachamara na Law & More na-enye nkwado iwu nke ụlọ ọrụ ọka iwu, ebe ị nwere ikike ịmara na ụzọ maara nke ọka iwu. Can nwere ike ịkpọ ụlọ ọrụ anyị ka anyị zuo otu ndị ọka iwu n ’ụlọ, anyị nwere ike ịrụrụ gị ọrụ dịka onye ọka iwu na-adịgide adịgide ma ọ bụ nwee ike ịkpọ onye ọrụ. Law & More maka oru ngo, oghere ma ọ bụ ogologo oge nke onye ọka iwu na-anọghị n'ụlọ. Nke a na-eme Law & More inye nkwado iwu ahaziri.
Ọ bụghị naanị na anyị na-achọpụta ọnọdụ dị mma, ma anyị na-enye nkwekọrịta niile dị mkpa. Nke a ga - egbochi nsogbu n'ọdịnihu ma belata ohere nke usoro toro ogologo. Ọ bụrụ na usoro agbanyeghị nke a na - apụghị izere ezere, mgbe ahụ anyị nwere ihe ọmụma banyere ụlọ iji nyere gị aka. Dịka onye ọchụnta ego, ị nwere ike tinye uche gị niile na-azụ ahịa. Anyị na gị, anyị na-enyocha ọnọdụ ahụ ma chọpụta ụzọ dị iche iche. Interested nwere mmasị na ọrụ nke ọka iwu ụlọ ọrụ? Mgbe ahụ kpọtụrụ ndị ọka iwu ụlọ ọrụ na Law & More.